नाइट्रोजन समस्या के हो, किसानहरू किन गुनासो गरिरहेका छन् र किन गति घटाईरहेको छ? : मार्टिन Vrijland
यो वास्तविक कोर्रा जस्तो देखिन्छ! सबै किसानहरूले अचानक नाइट्रोजन कम गर्नु आवश्यक छ। त्यो शब्द 'नाइट्रोजन' पहिले नै अचेल शब्द 'दिक्कत' भएको छ र जसले गर्दा सडकको औसत मानिसले सोच्छ कि हामी त्यस्तो पदार्थसँग व्यवहार गरिरहेका छौं जुन हामी सबैले दिक्क लाग्ने छौं। सम्भवतः धेरैले शब्द CO2 सँग सम्बद्ध गर्छन् र भिन्नता अज्ञात छ। नाइट्रोजन मूलत: प्रकृतिमा एक प्राथमिक कण हो। शब्द 'नाइट्रोजन' त्यसैले एक परमाणु बुझाउँछ जुन प्रकृतिमा मात्र बाउन्ड रूप (अणुको रूपमा) को रूपमा देखा पर्दछ। यसैले, किसानको रूपमा, तपाईं वास्तवमै नाइट्रोजन कम गर्न सक्नुहुन्न। तपाई, उदाहरण को लागी, अमोनिया कम गर्न सक्नुहुन्छ। अमोनिया NH₃ वास्तवमै मापन योग्य हो र फेला पर्दछ, उदाहरणका लागि, गाईको मलमा। राज्यले नाइट्रोजन घटाउन चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा मुख्यतः एनएलपी (न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग) लाई छनौट गरेर जनतालाई खेल्ने छनौट हो। नाइट्रोजन कटौतीको मतलब वास्तवमा केही पनि हुँदैन। तपाईं के कम गर्नुहुन्छ नाइट्रोजन ग्यास, अमोनिया of धेरै अन्य पदार्थ मध्ये एक कुन तत्वमा नाइट्रोजन हुन्छ?
तपाईलाई उक्त सामानबाट नाइट्रोजन राम्रोसँग थाहा छ जुन बोतलको उच्च चापमा पर्दछ र तपाइँले त्यसलाई बाक्लो पन्जाले (वा इन्सुलेटेड बोतलबाट फोटोमा) पोसाउनुपर्दछ, किनभने अन्यथा तपाइँको औंलाहरू स्थिर हुन्छन्: नाइट्रोजन ग्यास (N2)। यो उदाहरण को लागी मौसा हटाउन को लागी प्रयोग गरीन्छ। चाँडै नाइट्रोजन हाई-प्रेसरको बोतलबाट बाहिर आउने बित्तिकै उफ्रिन्छ र वाफ हुन्छ। योसँग उबलने तापमान -195,8 ° C छ र त्यो तापक्रम जुन नाइट्रोजन तरल छ। नाइट्रोजन ग्यास यति धेरै चिसो छ र तुरुन्तै खुला हावामा वाष्पीकरण गर्न थाल्छ। कडा स्टिलको बोतलहरूमा यसलाई उच्च दबाबमा राख्दा यसले तरल बनाउँछ। त्यो शारीरिक नियम हो।
हामी CO2 कम गर्न थाल्यो भनेर हामी पहिले नै थाहा थियो। CO2 को नाइट्रोजन ग्यास (N2) सँग केहि गर्नको छैन। CO2 को मतलब कार्बन डाइअक्साइड हो। त्यसोभए त्यो शब्द यसैले संरचना गरिएको छ: डि-अक्साइड 2x अक्सीजन हो। यससँग जोडिएको दुई अक्सिजन परमाणुको साथ एक कार्बन परमाणु। कार्बन डाइअक्साइड कार्बन परमाणु युक्त ईन्धनले उत्पादन गर्छ। पेट्रोल, केरोसिन र डीजल सबै कार्बन आणविक हुन्छन्। त्यसकारण ईन्धन अणु अन्य चीजहरूको बीचमा बनेको छ, कार्बन परमाणु र, हावामा जलाउँदा (अक्सिजन, O2 ग्यास), CO2 पूर्ण दहनको साथ सिर्जना गरिएको छ र कार्बन मोनोअक्साइड (CO) अपूर्ण दहनको साथ उत्पन्न हुन सक्छ। पछिल्लो कहिलेकाँही घरको ग्यासको हिटरमा हुने गर्थ्यो जसले गर्दा दिक्क लाग्ने थियो। त्यहाँ तपाईंले नाइट्रोजन र CO2 को बीचमा अचेतन लिंक पनि देख्न सक्नुहुन्छ। रसायनिक र वास्तविक संसारमा ती दुईको एक अर्कासँग बिलकुलै केही गर्न हुँदैन।
यदि किसानहरूले नाइट्रोजन घटाउनुपर्‍यो भने उनीहरूले केहि कम गर्नु पर्छ जसको परिभाषा पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैन। यो किनभने किसानहरूले नाइट्रोजन ग्यास उत्पादन गर्दैनन्। नाइट्रोजन ग्यास सबैभन्दा सामान्य शुद्ध ग्यास हो र वातावरणको कुल खण्डको 78,1% गठन गर्दछ। नोट गर्नुहोस् कि परमाणु केवल अन्य परमाणुहरूको सम्बन्धमा प्रकृतिमा मात्र फेला पार्न सकिन्छ। अक्सिजन परमाणु (ओ) जस्तै मात्र, उदाहरणका लागि, अक्सिजन ग्यास (O2) वा पानीमा देखा पर्दछ (H2O)। नाइट्रोजन यौगिकहरू निरन्तर वातावरण र जीवित जीवहरूको बीचमा आदान प्रदान गर्दछ। नाइट्रोजन सबैभन्दा पहिले प्रशोधन गरिनु पर्छ वा बिरूवा प्रयोगयोग्य फार्ममा "स्थिर" गर्नुपर्दछ, सामान्यतया अमोनिया। अमोनिया भनेको किसानहरूले उत्पादन गर्दछन् (कमसेकम तिनीहरूका गाईवस्तुहरूले)। अमोनिया बोटबिरुवाका लागि उपयोगी र उपयोगी छ, त्यसैले किसानहरूले तिनीहरूको जमिनमा मल फैलाउँछन्।
जब अमोनिया बोटबिरुवाहरु द्वारा अवशोषित हुन्छ, यो प्रोटिन संश्लेषित गर्न प्रयोग गरिन्छ। यी बोटहरू जनावरहरूले पचाउँछन् जसले नाइट्रोजन यौगिकहरू आफ्नै प्रोटीनको संश्लेषण गर्न र नाइट्रोजन युक्त फोहोर (अमोनिया) बाहिर निकाल्छन्। अन्तमा, यी जीवहरू मर्छन् र विघटित हुन्छन्, ब्याक्टेरिया र वातावरणीय ऑक्सीकरण र डेनिट्राफिकेशन हुन्छन्, वातावरणमा निःशुल्क नाइट्रोजन ग्यास (N2) छोड्दछन्। एक अद्भुत उपयोगी र आवश्यक चक्र।
ठीक CO2 जस्तै, त्यहाँ नाइट्रोजन ग्यासको बारेमा विषाक्त वा खतरनाक केहि छैन। वास्तवमा नाइट्रोजन ग्यास एक 'अक्रिय' ग्यास हो जुन स्वभावैले अन्य पदार्थहरूको साथ रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रवेश गर्नलाई झुकाव राख्दैन। यो हानिरहित, गैर विषैले, गन्ध रहित छ र हामी यसलाई सबै दिन मा सास फेर्न; अक्सिजन जस्तै। त्यो अक्सिजन जुन फेरि रूखहरू द्वारा CO2 को अवशोषणको परिणामको रूपमा उत्पादन गर्दछ। दुबै CO2 र नाइट्रोजन ग्यास सकारात्मक र राम्रो ग्याँसहरू हुन्, र राजनीति अब (र कार्यकर्ता समूह) दाबी गर्छन् कि ती खतरनाक छन्। त्यो किनभने विश्वव्यापी स्तरका सरकारहरूले वैज्ञानिकहरूलाई सम्झौता गरीरहेको छ कि कहानीलाई विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ, जबकि कुनै द्वेषयुक्त जैविक, रासायनिक वा भौतिक व्याख्या दिन सकिदैन। रिपोर्टहरू कि पृथ्वीमा तातो अवधिमा हावामा अधिक CO2 थियो भनेर देखाउने, CO2 सौर क्रियाकलापको परिणाम हो न कि कारण हो। हामी विज्ञान जादूको ग्लोबल टैक्स प्रणाली र यस्तो प्रणाली लागू गर्न को लागी साक्षी छौं जुन सबैको खर्च पत्ता लगाउन सकिन्छ (त्यसैले ब्लकचेन पैसा)।
2015 पछि, किसानहरू PAS (नाइट्रोजन दृष्टिकोण कार्यक्रम) मा आयोजित गरिएको छ। हामी विगत केही हप्ताको विरोध देख्दछौं किनकि आवश्यकताहरू लागु गर्न लगाईएको हो जुन लागू गर्न कठिन वा असम्भव छ, जसले दिवालिया किसानहरूलाई अग्रसर गराउँछ। मार्क रुट्टले हिजो एक दिन किसानहरूको कुरा सुनेर बिताए भन्ने कुरा तथ्य थियो (उनिसँग कुरा गर्दै र त्यसपछि केहि पनि नगर्दै) ग्रोनिंगेन ग्यास उत्खनन र परिणामको भूकम्पजस्तै हो: अब र राजनीतिज्ञ आफ्नो अभिनय क्षेत्रको भ्रमण गर्छन्। र मानिसहरूलाई भाप उडाउन दिनुहोस्। रुट्टले किसानको भेटमा विश्वासका साथ जान सक्छन, यो जानेर कि डच राज्यले धेरै वर्षदेखि सञ्जालको नेटवर्कमा लगानी गरेको छ। प्यादे हरेक पेशामा; Inoffizieller Mitarbeiter को एक नेटवर्क समाज को हरेक तह मा विपक्षी प्यादहरु लाई नियन्त्रित को रूप मा। आफूलाई 'प्रधानमन्त्री' भन्न सक्ने एक अभिनेताका रूपमा उनी वास्तविक आक्रमणबाट डराउनुपर्दैन, किनभने सबै दुःखबाट बच्ने किसानहरू पनि यस समूहमा हुन सक्छन् र उनीहरू चुप लाग्नेछन्।
किनकि तपाईं नाइट्रोजन उत्सर्जन मापन गर्न सक्नुहुन्न, यदि तपाईंसँग कसले वा के नाइट्रोजन उत्सर्जन गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेको स्पष्ट परिभाषा छैन भने तपाईंलाई समस्या छ। उदाहरणको लागि, के एउटा गाईले नाइट्रोजन ग्यास उत्सर्जन गर्छ जब उसले खेती गर्छ? होईन, त्यहाँ मूत्र र पूमा एक नाइट्रोजन यौगिक छ, तर गाईले नाइट्रोजन ग्यास उत्सर्जन गर्दैन। कहिलेकाँही कृषकहरूले नाइट्रोजन ग्यास प्रयोग गर्दछ, उदाहरणका लागि घाँसको वृद्धि रोक्न वा फल भण्डार गर्न, तर त्यसले खासै केही गर्दैन र यसबाहेक, नाइट्रोजन ग्यास हानिरहित र राम्रो ग्यास हो। किसानहरूले त्यसरी एक गणना उपकरण प्राप्त गर्नुपर्‍यो, जुन राज्यले उनीहरूको लागि निर्धारण गर्‍यो उनीहरूसँग उनीहरूले नाइट्रोजन प्रदूषण गर्छन्। अन्त मा यो को बारे मा बाहिर जान्छ अमोनिया र त्यसकारण मल र पेशाबमा के छ। नाइट्रोजन प्रचार कारणहरूको लागि र अचेतन कार्यक्रमको लागि छनोट गरिएको शब्द रहन्छ "तपाईको दम घुट"। किन यो छैन? अमोनिया प्रदूषण उल्लेख गरिएको छ र हामी सँधै नाम सुन्दछौं जसले हामीलाई घुटन सम्झाउँछन्? वर्णन गरिए अनुसार: जुन हामी 'subliminal प्रोग्रामि call' भन्छौं।
एक्टर एसोसिएशन हेगका अन्तिम योजनाहरू भनेको सडकहरूमा अधिकतम गति कम गर्नुपर्दछ। र त्यसो भए त्यहाँ निर्माणको बारेमा केहि कुरा थियो? तपाईं अझै यो प्राप्त? स्पष्ट रूपमा त्यहाँ थोरै किसानहरू हुनुपर्दछ, किनकि हामी अझ धेरै घरहरू र पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्षम हुन चाहन्छौं, र त्यसैले सडकहरूको गतिलाई कम गर्नुपर्नेछ, किनकि राज्यले ट्राफिक जरिवानामा केही अरबौं अतिरिक्त खर्च गर्न सक्दछ। प्रत्येक तर्क हरेक छलफलमा हराइरहेको छ र त्यो मनसाय देखिन्छ। त्यहाँ केवल सर्तहरू भित्र फालिन्छ जुन पेटको भावना भन्दा बाहेक अरू केही छोड्दैन (तर वास्तवमै अझै गल्ती हुन्छ)। यो अब तर्क र सामग्री को बारे मा छैन; मिडिया, राजनीति र पर्यावरणवाद को संसारमा सबै कुरा को बारे मा छ पेट भावनाहरु। यस बीचमा, त्यहाँ केवल एक प्रभाव छ र त्यो यो हो कि सबैले यसमा धेरै पैसा राख्नुपर्दछ वा केवल (किसानहरू जस्तो) दिवालिया हुन्छ।
शेल, तपाइँलाई त्यो कम्पनी थाहा छ जुनमा हाम्रो शाही परिवारको एक महत्वपूर्ण हिस्सा छ (सबै प्रकारका सुन्दर निर्माणहरूको पछाडि लुकेको) 2009 नाइट्रोजन यौगिकहरूमा सुरू भयो यसको ईन्धन थप्न। त्यो ईन्जिन उत्सर्जन क्लीनर बनाउन हुनेछ। वास्तवमा विपरित अवस्था जस्तो देखिन्छ र हामी भन्न सक्छौं समस्या तेल कम्पनीहरूले ईन्धनमा थपिएको छ। समस्या जसको लागि रुट्ट सरकारले अब 130 बाट 100 सम्म मोटरवेमा अधिकतम गति घटाई मार्फत समाधानको साथ आउन प्रयास गरिरहेको छ। न्यु योर्कको पेन स्टेट युनिभर्सिटीमा ईन्धन विज्ञान, सामग्री विज्ञान र ईन्जिनियरि ofका प्राध्यापक आन्द्री एल बोहेमान (जो अब बोगेम्यान हुनेछन्), न्यूयोर्क टाइम्समा एक्सएनयूएमएक्समा रिपोर्ट भइसकेका छन्:
नाइट्रोजन सम्पन्न ईन्धनहरू 'केही समयको लागि प्रयोगमा' आएको छ। उनले भने कि "नाइट्रोजन समृद्ध" भन्ने शब्दले औसत व्यक्तिलाई केहि पनि बताउँदैन जो एडिटिभ्सको रसायन विज्ञानको बारेमा थाहा छैन। ईन्धन विज्ञको रूपमा म आफैलाई के सोध्छु त्यो हो: "किन उनीहरूले अधिक नाइट्रोजन थपे, किनकि त्यसले सामान्यतया NOx उत्सर्जन बढाउँदछ?"
ईन्धनमा नाइट्रोजन युक्त यौगिकहरूको अतिरिक्त हुनु नै यसको कारण हो। समाधान त्यहाँ फेला पर्नु पर्छ: ईन्धन आपूर्ति गर्नेहरूसँग; तपाईंलाई थाहा छ अरबौं डलर त्यो परिवारले चलाउँछन् जुन दरबारहरूमा बस्दछन् र जसलाई हामी प्रजातन्त्र भनिन्छ भन्ने भ्रममा करहरू तिर्दछौं। केवल नाइट्रोजन यौगिक additives हटाउनुहोस्!
प्रत्येक मापन जुन हामी अहिले मान्छेहरू उडिरहेका देख्छौं शुद्ध छ र जेरोइन पाउ र अन्य धारणा ब्यबश्थापन टिभी कार्यक्रमहरूद्वारा भाडामा लिइएको विज्ञहरूले समर्थन गरेको आंत भावनाको प्रचारमा आधारित छ। त्यहाँ कुनै पूर्ण आलोचना वा ठोस वैज्ञानिक आधार छैन। र यदि त्यहाँ आलोचना छ भने, सेन्सरशिपले सुनिश्चित गर्दछ कि मानिसहरूले यसलाई देख्दैनन्। यो सबै पेटको भावना, अचेतन प्रोग्रामिंग, र भारी भुक्तान अभिनेता को बारे मा हो जसले तपाईंलाई ऊनमा एक गलाको साथ ऊनमा राख्छन्। मेरो विचारमा किसानहरूको लागि नाइट्रोजन आवश्यकता ल्याण्डजेपिकको वरिपरि घुम्छ, जहाँ राज्यले यसलाई किसानहरूको लागि सकेसम्म गाह्रो बनाउन चाहन्छ। कति गाह्रो छ कि केहि दिवालिया हुन्छन् र उनीहरुका किसान छिमेकीहरूले जग्गा लिन सक्छन् र बाँकी जग्गा निर्माण र पूर्वाधार परियोजनाहरुका लागि राज्यमा जान सक्छन। अधिकतम गति तल झर्दै गएको तथ्यले थप अरबौं डलर (जरिवानाबाट) निम्त्याउने छ, जहाँ ती नयाँ पूर्वाधार र निर्माण परियोजनाहरु लाई वित्तिय गर्न सकिन्छ। केही किसान बोतल भित्र पस्छन् भन्ने तथ्यले राज्यलाई गोलमाल बनाउनेछ। यी किसानहरू आफ्ना छिमेकीको साथ नोकरको रूपमा राम्ररी भेट्न सक्दछन्। यो सबै वातावरण को बारे मा छैन; यो सबै पैसा र अधिक नियमहरूको बारेमा छ (पढ्नुहोस्: अधिक नियन्त्रण, थप पुलिस राज्य)। नेदरल्याण्ड्स बाकी युरोप र बाँकी विश्वको लागि परीक्षण मैदानको रूपमा।
Lees यहाँ जारी राख्नुहोस्
स्रोत लिङ्क सूची: nytimes.com
ट्याग: 100%, 130, दृष्टिकोण, अमोनिया, किसानहरू, CO2, विशेष, अधिकतम, Nederlandse, PAS, कार्यक्रम, विरोध, गति, राजमार्गहरू, नाइट्रोजन
Matthijs van den Brink लेखे:
7 नोभेम्बर 2019 मा 14: 13
“स्वास्थ्य राम्रो र बैजनी भयो,” किसानहरूले भने, त्यसैले त्यहाँ धेरै नाइट्रोजन हुन सकेन। जसले सल्लाह दिन्छ कि त्यहाँ धेरै नाइट्रोजन पनि हुन सक्छ। वा यो अधिक अमोनियाको कारणले माटोको एसिडिफिकेशनको कारण हो? र यति धेरै नाइट्रोजन छैन? तर त्यसो भए मलको निरन्तर प्रसार पनि राम्रो हुँदैन। त्यसोभए तपाईंसँग कुनै विन्दु छैन (शब्द नाइट्रोजन पनि गलत छ भने पनि)?
7 नोभेम्बर 2019 मा 14: 23
अमोनिया आफैमा अम्लीय हुँदैन, तर आधारभूत; अर्थात् यसले एसिडलाई बेअसर गर्दछ।
नाइट्रोजन शब्द लेखमा वर्णन गरिएको छ र गाईको मलमा नाइट्रोजन परमाणु अमोनियाको अंश बाहेक अरू केहि केहि गर्न सक्तैन। अमोनिया बोटको लागि उपयोगी र राम्रो छ।
अवश्य पनि तपाइँ भन्न सक्नुहुन्छ कि 'धेरै नै' भन्ने सबैकुरा राम्रो छैन, तर राजनीतिक एजेन्डा मुख्यतया पैसा र जग्गा स्वामित्वको बारेमा देखिन्छ (वा यसलाई लिएर) यी वातावरणीय आवश्यकताहरूको साथ अलीबी
7 नोभेम्बर 2019 मा 14: 31
कथा यो छ कि नेदरल्याण्ड्समा धेरै गाईवस्तुहरू छन् र त्यसैले पनि मल र अमोनिया उत्सर्जन धेरै। यदि यो जमिनमा बसोबास गर्छ भने बिरुवाहरू जसले गरीब माटोलाई माया गर्छन् - र यति धेरै नाइट्रोजन प्रशोधन गर्न सक्दैनन् - यसबाट ग्रस्त हुन्छन्। नाइट्रोजन सम्पन्न माटोमा हुर्कने बोटबिरुवाहरू, जस्तै घाँस र नेटलहरू, माथिल्लो हात लिन्छन्।
त्यो आधिकारिक व्याख्यान हो ... यो केहि बर्ष पहिले "एसिड वर्षा" hype को याद ताजा गराउँछ। "बिरुवाहरू जसले गरीब माटोलाई प्रेम गर्दछ ...", "लुप्तप्राय बिरुवाहरू" .. हो हो .. फेरि हामी नाइट्रोजन र नाइट्रोजन-धनी माटो शब्द देख्छौं। शब्द नाइट्रोजन अनुचित छ। लेखमा चित्रमा बताइए अनुसार नाइट्रोजन मात्र यौगिकहरूमा हुन्छ।
म भन्छु: यो सबै पैसाको बारेमा हो, अधिक नियमहरू र जग्गा हडताल
7 नोभेम्बर 2019 मा 15: 26
त्यसकारण आधिकारिक पढाइ भनेको के हो भने अमोनिया केहि बोट बिरुवाको लागि प्रकृति भण्डारमा खराब हुन्छ।
निस्सन्देह यो पनि धेरै राम्रो छैन, तर यो सबै नेदरल्याण्डमा पशुपालनको विनाश जस्तो देखिन्छ। एक alibi को रूपमा वातावरण जनसंख्या देखि अधिक पैसा प्राप्त गर्न।
यो सबै थोरै हुन सक्छ, तर यो मुख्यतया अधिनायकवादी नियन्त्रण प्रणालीको परिचय र ब्यबहारको बारेमा र पैसाको बारेमा देखिन्छ।
हामीले यो पनि पत्ता लगायौं कि वैज्ञानिकहरूले आधिकारिक व्याख्यानको विरोधाभास गर्ने पदोन्नति पाउँछन् र कहानीलाई समर्थन गर्ने अन्यले CO2 कथामा पाउँछन्। प्रश्न के यो यहाँ मामला हो कि छैन।
7 नोभेम्बर 2019 मा 15: 52
अम्मोइना उत्सर्जनमा कटौती ल्याउनु भनेको मासु खपतमा कमी ल्याउने सानो कदम हो। मानिसहरूले कसरी मासु किन्छन् र खाउँदछन् कसरी तपाईं जाँच गर्नुहुन्छ? 'चीजहरूको इन्टरनेट' मार्फत (5G) र खपत योग्य खपत। यसको लागि एउटा ब्लकचेन-आधारित पैसा प्रणाली र घरमा स्मार्ट मीटर जस्ता चीजहरू आवश्यक हुन्छ (फ्रिज के मा भित्र जान्छ भनेर मापन गर्न, के हुन्छ बाहिर जान्न स्मार्ट शौचालय)।
"नाइट्रोजन" अलिबी, सँगै CO2 hype सँग, त्यसैले एकपक्षीय नियन्त्रण प्रणालीहरू परिचय गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो।
7 नोभेम्बर 2019 मा 19: 34
र यदि एक किसान समाधानको साथ आउँदछ, त्यसपछि त्यो तार्किक रूपमा रोकिन्छ, किनकि यो विश्वव्यापी 2030 कार्यसूचीसँग उपयुक्त छैन। स्वतन्त्रता प्रतिबन्ध र एक गुलाम जस्तै बगैंचामा प्रवेश ..
7 नोभेम्बर 2019 मा 20: 04
सुन्दर समाधान। मैले एकचोटि जिओलाइट्समा थोक ब्यापार सुरू गरें र टर्की र अष्ट्रेलियाबाट खानीबाट युरोपमा त्यो सामान ल्याउने पहिलो मानिस हो। दुर्भाग्यवस, एक निश्चित बिन्दु मा एक ठूलो खरीददारले बिल तिर्ने छैन, त्यसैले म कम्पनी बचाउन सक्दिन। नयाँ मालिक जसले यसलाई दिवालियावाजीबाट किनेका थिए, मसँग वेबसाइटमा अझै लेखिएका सबै पाठहरू थिए। सबै भन्दा राम्रो अब एक करोडपति छ र मलाई फोन कलका साथ सबै कामका लागि धन्यबाद।
जेओलाइट, र विशेष रूपमा क्लिनोप्टोलाइट, अमोनियालाई ड्रपिंगबाट फिल्टर गर्दछ र नुन नुहाउने माध्यमबाट पुनर्जीवित हुन्छ। मैले आपूर्ति गरेको क्लिनोप्टोलाइटलाई पनि EU द्वारा एक आहार पूरकको रूपमा अनुमोदन गरिएको छ। मँ घोडा फार्म र ठूला (लूज-रनिंग) कुखुराको घरहरूमा यो पुर्‍याउने पहिलो थिएँ।
अर्को समाधान जुन काम गर्दछ। तर व्यक्तिहरू समाधानहरू चाहँदैनन्, तिनीहरू ईन्डस्ट्रीलाई बिच्छेद गर्न र अझ राम्रो पकड लिन चाहन्छन्।
7 नोभेम्बर 2019 मा 23: 07
मार्टिन तपाईंको स्पष्टीकरणले धेरै वर्णन गर्दछ, मादुरोडम र वरपरका सबै चीजहरू लुसिफेरिया उल्टाउने विषय हो।
7 नोभेम्बर 2019 मा 21: 14
यो पनि ध्‍यान दिनुहोस् कि बूम स्टेट काउन्सिलबाट "नाइट्रोजन शासक" को साथ शुरू भयो।
Willen-अलेक्ज्याण्डर प्रमुख हो कि क्लब।
त्यसोभए यो समस्याबाट आउने केसबाट स्पष्ट हुन्छ।
8 नोभेम्बर 2019 मा 12: 17
सबै कुरा, विशेष गरी चीजहरू जुन लिपिमा केटाहरूको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ, परिपूर्णताको लागि निर्देशित हुन्छन्। त्यसकारण उनीहरूको 'अदालत' मा अदालत जान कुनै मतलब छैन।
मैले बुझिन कि किसानहरू, निर्माण विश्व, आदि। सँगै काम गर्दैनन्? खतरा अझै रहन्छ कि संगठनहरू, जुन गहिरो, गहिरो, केही चाहान्छन् द्वारा घुसपैठ गरिएको थियो। कस्तो देश। भाग्यवस हामी 'कानूनको शासन' मा बाँचिरहेका छौं।
7 नोभेम्बर 2019 मा 23: 31
र नेदरल्याण्डको सबैभन्दा ठूलो प्रचार समाचारपत्रले अब क्षति नियन्त्रण गर्न सुरु गर्न सक्दछ, अब यो स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ (किनभने मापनले थाहा पाउँदैछ, ठूलो डाटा) जुन मानिसहरूले यसलाई लिइरहेका छैनन्।
(इन्कग्निटो मोडमा पढ्न स्वतन्त्र, तर त्यो मूर्खता नहेर्नु राम्रो हुन्छ)
मानिसहरूले नाइट्रोजनको बारेमा कुरा गरिरहन्छन्, तर यो नाइट्रोजनको बारेमा होइन। यो एक प्रचार नाम हो, छाप छोड्नु हो कि तपाईं घुट गर्दै हुनुहुन्छ!
« शट वकिल फिलिप Schol र गलत अपहरण रिपोर्ट Schiphol
जनतालाई बेवास्ता गर्दा तपाईं कसरी सरकारलाई परिवर्तन गर्न जबरजस्ती गर्न सक्नुहुन्छ? »
कुल भ्रमण: 13.903.452